Adhipati paccayo – Dhamma Training Center
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ဝိဘင်္ဂဝါရ
Adhipatipaccayo (Predominance condition) 3. Adhipatipaccayoti – chandādhipati chandasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Vīriyādhipati vīriyasampayuttakānaṃ dhamm-ānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Cittādhipati cittasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Vīmaṃsādhipati vīmaṃsasampayut- takānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Yaṃ yaṃ dhammaṃ garuṃ katvā ye ye dhammā uppajjanti cittacetasikā dhammā, te te dhammā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ adhipatipaccayena paccayo. Adhipati means predominance. There are two kinds of Adhipati. Ārammanh ‘ādhipati and Sahajāt ādhipati’ . ‘Ārammanh’ ādhipati is very charming object. This object can charm our mind to it. It is compared toalong strong stick oraline of rope. We have explained these examples in the object condition. Sahajāt ‘ādhipati is compared toauniversal king because that king is the king of all the world. He is the one who is predominant in all of the world. As Sahajāt’ ādhipati is compared toauniversal king and also we may compare it toapresident in this country. The president has the sole power, so Adhipati is like the president. There are four Adhipatis. They are predominant desire, predominant effort, predominant mind and predominant investigation. At one time, only one of them is perdominance condition. When one is predominance condition, the others are conditioned state of predominance condition. When earnest desire arises, only earnest desire is predominance condition. When earnest effort arises, only earnest effort is predominance condition. When earnest mind arises, only earnest mind is predominance condition.When earnest investigation arises, only earnest investigation is predominance condition. At one time, only one of them can be predominance condition. These are four Adhipatis. 3. Predominance condition – Adhipati Paccayo 3. Adhipatipaccayo Paccayaniddeso Page|2www.dhammatrainingcenter.com 13. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇā- dhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇā- dhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposatha- kammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā paccavekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Sahajātā- dhipati – kusalādhipati sampayut- takānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1) 414. Kusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipati-paccayena paccayo. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, pubbe suciṇṇāni garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Sahajātādhipati – kusalādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipati-paccayena paccayo. (3) Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (4) 415. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa adhipati-paccayena paccayo. Ārammaṇā-dhipati, sahajātādhipati. Āra-mmaṇādhipati – rāgaṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Diṭṭhiṃ garuṃ katvā assādeti abhinan-dati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sahajātādhipati – akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1) Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati– akusalā-dhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (2) Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa adhipati paccayena paccayo. Sahajātādhipati – akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (3) 416. Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati. Nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati – vipākābyākatakiriyābyākatādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo. (1) Abyākato dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati – sekkhā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti, nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti. Nibbānaṃ gotrabhussa, vodānassa, maggassa adhipatipaccayena paccayo. (2) Abyākato dhammo akusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇā-dhipati – cakkhuṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. Sotaṃ…
ghānaṃ… jivhaṃ… kāyaṃ… rūpe… sadde… gandhe… rase… phoṭṭhabbe… vatthuṃ… vipākābyākate kiriyābyākate khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati; taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati. (3)
၃ – အဓိပတိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ
၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာ-ဓိပတိ။ အာရမ္မဏာဓိပတိဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊
ပုဗ္ဗေသုစိဏ္ဏာနိဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။ ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။ သေက္ခာ ဂေါတြဘုံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ၊ ဝေါဒါနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။ သေက္ခာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
သဟဇာတာဓိပတိကုသလာဓိပတိသမ္ပယုတ္တကာနံခန္ဓာနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)
၄၁၄။ ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ
ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ပုဗ္ဗေသုစိဏ္ဏာနိဂရုံ
ကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ
အဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာ-ဓိပတိ။
အာရမ္မဏာဓိပတိအရဟာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
သဟဇာတာဓိပတိကုသလာ-ဓိပတိစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံရူပါနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)
ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
သဟဇာတာ-ဓိပတိကုသလာဓိပတိသမ္ပယုတ္တကာနံခန္ဓာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စရူပါနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၄)
၄၁၅။ အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာ-ဓိပတိ။
အာရမ္မဏာဓိပတိရာဂံဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
ဒိဋ္ဌိံဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ သဟဇာတာဓိပတိ
အကုသလာ ဓိပတိသမ္ပယုတ္တကာနံခန္ဓာနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)
အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယော။
သဟဇာတာဓိပတိ အကုသလာဓိပတိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံရူပါနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)
အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
သဟဇာတာဓိပတိအကုသလာ-ဓိပတိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အဓိပတိ-ပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)
၄၁၆။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိ-ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊
သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမ္မဏာဓိပတိအရဟာ ဖလံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ နိဗ္ဗာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
နိဗ္ဗာနံ ဖလဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဟဇာတာဓိပတိ ဝိပါကာဗျာကတ-ကိရိယာဗျာကတာဓိပတိ
သမ္ပယုတ္တကာနံခန္ဓာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စရူပါနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)
အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
အာရမ္မဏာဓိပတိသေက္ခာ ဖလံဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။ နိဗ္ဗာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
နိဗ္ဗာနံ ဂေါတြဘုဿ၊ ဝေါဒါနဿ၊ မဂ္ဂဿ အဓိပတိ-ပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)
အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
အာရမ္မဏာဓိပတိစက္ခုံ ဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။ သောတံ။ ဃာနံ။ ဇိဝှံ။ ကာယံ။
ရူပေ။ သဒ္ဒေ။ ဂန္ဓေ။ ရသေ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ဝတ္ထုံ။
ဝိပါကာဗျာကတေ ကိရိယာဗျာကတေ ခန္ဓေ ဂရုံ ကတွာအဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။ (၃)
ကုသိုလ်တရားသည်ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည်အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲစွာ အစိုးရ ခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်
၂။ အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရခြင်းဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။
ဒါနံ ဒတွာ သီလံသမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံကတွာ၊ တံ ဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေသုစိဏ္ဏာနိဂရုံကတွာပစ္စဝေက္ခတိ။
အလှူဒါနပေး၍၊ ငါးပါးသီလဆောက်တည်၍၊ ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလကို ဆောက်တည်၍၊ ထိုထိုပြုပြုသမျှသော
ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ ရှေးကပြုလုပ်လေ့ကျင့်ခဲ့သော ကာမာ
ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
ဈာန်ဝင်စားပြီးနောက်ဈာန်မှထမြောက်၍ ဝင်စားပြီးသော ဈာန်ကိုဆင်ခြင်၏။
သေက္ခာ ဂေါတြဘုံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်ဟူသော အရိယာသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သောတာပတ္တိ
မဂ်၏ရှေ့ ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို လွှမ်းမိုးဖျက်စီးတတ်သည့်ဂေါတြဘူကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်
သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်၏ရှေ့ ကိလေသာမှ
သေက္ခာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
ကျင့်ဆဲဖြစ်သော အရိယာသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ သောတာပတ္တိမဂ်၊ သကဒါဂါမိမဂ်၊ အနာဂါမိမဂ်မှထမြောက်၍ မိမိဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ မဂ်ကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်ကုန်၏။
အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့်သဟဇာတာဓိပတိဟူသည်-
ကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည် အတူ ယှဉ်တွဲ၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါး တို့အား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဒါနံဒတွာ သီလံသမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံကတွာ၊ တံဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ၊
အလှူဒါနပေး၍ ငါးပါးသီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလတည်းဟူသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ်
ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ ထိုထိုပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်တို့ကို အဿာဒေတိ သာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန်
နှစ်သက်ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ စွဲလမ်း
ကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ပုဗ္ဗေသုစိဏ္ဏာနိဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
ရှေး၌ ကောင်းစွာ လေ့ကျက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုန်သော ထိုထိုဒါန၊ သီလနှင့် ရှစ်ပါးသောဥပုသ်သီလတည်းဟူသော
ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိသာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ
အလွန်နှစ်သက်ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက် ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍
စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ဈာနာ ဝုဋ္ဌဟိတွာ ဈာနံဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
လောကီ ကုသိုလ်ဈာန်ဝင်စားခြင်းမှထ၍ ယင်းဈာန်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိ
သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်၏၊ ထို နှစ်သက်သာယာ မြတ်နိုးသော စိတ်ကို အလေးအမြတ်
ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၃)
ကုသိုလ်တရားသည်အဗျာကတတရားအား အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည်အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲစွာသော အစိုးရ ခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်
၂။ အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရခြင်းဟူသော သဟဇာတာဓိပတိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
အရဟာ မဂ္ဂါ ဝုဋ္ဌဟိတွာ မဂ္ဂံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်မဂ်မှထပြီး အရဟတ္တမဂ်ကို အလေးအမြတ်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။
အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့်သဟဇာတာဓိပတိဟူသည်–
ကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၄)
ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း အဓိပတိပစ္စယ
အတူတကွဖြစ်၍ လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့်သဟဇာတာဓိပတိပစ္စည်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်း ဟူသည်-
ကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည် အတူယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာ
ဏက္ခန္ဓာဟူသော ကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း
အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)
၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည်အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲစွာ အစိုးရခြင်းဟူသော အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်
အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် အာရမ္မဏာဓိပတိ ပစ္စည်း
ရာဂံ ဂရုံ ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
စွဲလမ်းကပ်ငြိမှု ရာဂကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက် အာရုံပြု၍
အဿာဒေတိသာယာ မြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်
ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ဒိဋ္ဌိံဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
လွဲမှားသော ဒိဋ္ဌိအယူကိုအလေးအမြတ်အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိသာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်
ကြည်နူး၏၊ ထို သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်ကြည်နူးမှုကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ
အကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည် အတူယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာ
ဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာတို့အား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)
အကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်။
အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။(အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၃)
အကုသိုလ်တရားသည်အကုသိုလ်တရားအားလည်းကောင်း၊ အဗျာကတတရားအားလည်းကောင်း၊ အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
အကုသလာ ဓိပတိသမ္ပယုတ္တကာနံခန္ဓာနံစိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စရူပါနံအဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
အကုသိုလ်ဖြစ်သော အဓိပတိသည် အတူယှဉ်၍ဖြစ်သည့် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော အကုသိုလ်နာမ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ္တဇရုပ်တို့အား အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
၄၁၆။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁)
အရဟာ ဖလံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ နိဗ္ဗာနံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ။ နိဗ္ဗာနံ ဖလဿ အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယော။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်အရဟတ္တဖိုလ်ကို အလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ နိဗ္ဗာန်ကို အလေးအမြတ်
ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ နိဗ္ဗာန်သည် သောတာပတ္တိဖိုလ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ်နှင့်အရဟတ္တ
ဖိုလ်ဟူသော ဖိုလ်လေးပါးအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
ဝိပါကာဗျာကတ ကိရိယာဗျာကတာဓိပတိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယော။
ဝိပါက်အဗျာကတ ကိရိယာအဗျာကတဖြစ်သော အဓိပတိသည် အတူယှဉ်တွဲ၍ဖြစ်သော ဝေဒနာက္ခန္ဓာ, သညာ-
က္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ဟူသော နာမ်ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း၊ ထိုစိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်သောစိတ္တဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
သေက္ခာ ဖလံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။ နိဗ္ဗာနံဂရုံကတွာ ပစ္စဝေက္ခန္တိ။
ကျင့်ဆဲ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် အရိယာသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ သောတာ ပတ္တိဖိုလ်၊
သကဒါဂါမိဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ် အောက်ဖိုလ်ကို အလေးအမြတ် ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။ နိဗ္ဗာန်ကိုအလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်၏။
နိဗ္ဗာနံဂေါတြဘုဿ၊ ဝေါဒါနဿ၊ မဂ္ဂဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။
နိဗ္ဗာန်သည်သောတာပတ္တိမဂ်၏ ရှေ့၌ဖြစ်သော ဂေါတြဘူစိတ်အားလည်းကောင်း၊ မဂ်၏ ရှေ့၌ဖြစ်ပြီး ကိလေသာမှဖြူစင်သော ဝေါဒါန်စိတ်အားလည်းကောင်း၊ မဂ်စိတ်အားလည်းကောင်း၊ အဓိပတိပစ္စယ သတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏။
အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ အကု-၃)
စက္ခုံဂရုံကတွာ အဿာဒေတိအဘိနန္ဒတိ၊ တံဂရုံကတွာ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
မျက်စိအကြည်ကို အလေးအမြတ်အာရုံပြု၍ အဿာဒေတိသာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်၏၊
ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို အာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
သောတံ။ ဃာနံ။ ဇိဝှံ။ ကာယံ။ ရူပေ။ သဒ္ဒေ။ ဂန္ဓေ။ ရသေ။ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ဝတ္ထုံ။ ဝိပါကာဗျာကတေ ကိရိယာဗျာကတေ ခန္ဓေဂရုံ
ကတွာ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ ဂရုံ ကတွာ ရာဂေါဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိဥပ္ပဇ္ဇတိ။
နားအကြည်၊ နှာခေါင်းအကြည်၊ လျှာအကြည်၊ ကိုယ် အကြည်၊အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ နှလုံးသားတည်ရာဝတ္ထု၊ ဝိပါက်အဗျာကတ၊ ကိရိယာအဗျာကတတို့နှင့်အတူ ဖြစ်ကုန်သော နာမ်ခန္ဓာတို့ကို အလေးအမြတ် အာရုံပြု၍
အဿာဒေတိ သာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိ အလွန် နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့ သာယာ မြတ်နိုး နှစ်သက်မှုကို
အလေးအမြတ်အာရုံပြု၍ စွဲလမ်း ကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာ၏။
၃။ အဓိပတိပစ္စယော ဘဝနှင့်ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ
အဓိပတိမှာ အကြီးအမှူးဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ ဣန္ဒြိယမှာ အစိုးရသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့်အဓိပတိပစ္စည်းနှင့်
ဣန္ဒြိယပစ္စည်းနှစ်ပါးတို့ အနက်ဓိပ္ပါယ်တူသယောင်ယောင်ထင်ရသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်မတူညီပါ။ ဥပမာဖြင့်ပြဆိုရလျှင်ထီးပြိုင်နန်းပြိုင်မင်းများ၏ အစိုးရခြင်းက ဣန္ဒြိယပစ္စည်းဟု ယူရမည်။ အတုမရှိပြိုင်ဘက်ကင်းသည့်စင်္ကြာ
မင်းတို့၏ အစိုးရမှုကိုမူအဓိပတိပစ္စည်း ယူသင့်ကြောင်း ဆရာမြတ်တို့က ညွှန်းတော်မူကြပါသည်။
အဓိပတိပစ္စည်း၏သင်္ချာမှာ (၁၀) ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘အဓိပတိယာ ဒသ’ ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကုသလ ဓမ္မာ သင်္ချာ-၄
(၁) ကု-ကု (၂) ကု-အကု (၃) ကု-ဗျာ (၄) ကု-ကု-ဗျာ
အဓိပတိပစ္စည်းတွင်အာရမ္မဏာဓိပတိနှင့်သဟဇာတာ ဓိပတိဟူ၍ နှစ်ပါးရှိပါသည်။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၏သင်္ချာမှာ (၇)ဖြစ်ပြီး သဟဇာတာဓိပတိ၏ သင်္ချာမှာလည်း (၇)ဖြစ်၏။ အာရမ္မဏာဓိပတိသည် အာရုံအကြီးအမှူးဖြစ်ပြီး၊ သဟဇာတာဓိပတိသည်အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်နာမ်တရား အကြီးအမှူး ဖြစ်သည်။အာရမ္မဏာဓိပတိဟူသည် အာရုံခြောက်ပါးကို အာရုံပြုရာတွင် သာမညအာရုံပြုခြင်းနှင့် ဂရုံကတွာအလေးအမြတ်ဂရုတစိုက်အာရုံပြုခြင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။ ပမာအားဖြင့် မြင်လိုက်မိသည့် အာရုံတစ်ခုခု၊ ကြားလိုက် မိသည့်အာရုံတစ်ခုခုက ‘မျက်စိထဲကကို မထွက်တော့ဘူး’ ‘နားထဲက မထွက်တော့ဘူး’ ဟု ပြောရာ၌ အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်၏။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် အာရုံက အကြီးအမှူးဖြစ်၏။ ဤသို့ အာရုံကအကြီးအမှုး ဖြစ်ရာတွင်ကောင်းမွန်သည့်ဣဋ္ဌာရုံ၌လည်းတူတူ၊ မကောင်းသည့်အနိဋ္ဌာရုံ၌လည်း တူတူပင်ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် အလေးအမြတ်ပြုအပ်သော လှပသည့် အဆင်းရူပါရုံကောင်းကောင်း၊အေးကြည်လှသည့်အသံသဒ္ဒါရုံ ကောင်းကောင်း၊မွှေးကြိုင်လှသည့်အနံ့ ဂန္ဓာရုံကောင်းကောင်း၊ ချိုဆိမ့်သည့် အရသာရသာရုံ ကောင်းကောင်း၊ သိမ်မွေ့နူးညံ့ သည့်အတွေ့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံကောင်းကောင်းနှင့် လောကီ လောကုတ္တရာ၌ ကြီးမား မြင့်မြတ်ကာအလေးအမြတ်ပြုအပ်သော ရုပ်နာမ်နိဗ္ဗာန် ဓမ္မာရုံကောင်းကောင်းများတို့ကသာ အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်ပေသည်။နိဗ္ဗာန်သည်သာမည အာရုံမဟုတ်သဖြင့် အာရမ္မဏာဓိပတိထိုက်၏။ အကြောင်းမှာ နိဗ္ဗာန်ကို တစ်ကြိမ်အာရုံပြုဖူးသူအဖို့စိတ်ထဲစွဲမြဲသောကြောင့်ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် ကာမအာရုံတို့သည် အလေးအမြတ်ပြုသော ပုဂ္ဂိုလ်အားသာလျှင် အာရမ္မဏာဓိပတိ ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အလေးအမြတ်မပြုသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ကျေးဇူးမပြုပါ။ ဈာန်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာမူ မိမိရအပ်ကုန်ပြီးသော မဟဂ္ဂုတ်ဈာန်ကိုလည်းကောင်း၊ အရိယသာဝက ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိရအပ်ကုန်ပြီးသောလောကုတ္တရာ တရားတို့ကိုလည်းကောင်း အလေးအမြတ်မပြုဘဲမနေပါ။
ဥဒေါင်းမ၏ တွန်ကျူးသံကြောင့်ဘုရားလောင်းရွှေဥဒေါင်းမင်း ညွှတ်ကွင်းမိ
ဗာရာဏသီပြည့်ရှင်မင်း၏ မိဖုရားကြီးခေမာက အိပ်မက်ထဲကရွှေဥဒေါင်းမင်းထံပါးက တရားကို နာကြားလိုကြောင်း မင်းကြီးထံကို သံတော်ဦးတင်လေ၏။ ထိုအခါ မင်းကြီး၏ စေခိုင်းချက်အရ မုဆိုးများက ဟိမဝန္တာတောင်ရှိ ရွှေဥဒေါင်းမင်းကို ညွှတ်ကွင်းဖြင့်ဖမ်းသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါ။ဘုရားလောင်း ရွှေဥဒေါင်းမင်းက နံနက်တိုင်း နေထွက်ချိန်တွင် ‘ဥဒေတယံ စက္ခုမာ ဧကရာဇာ၊ ဟရိဿ ဝဏ္ဏောပထဝိပ္ပဘာသော’ ဟူသော ဂါထာနှင့်‘ယေ ဗြာဟ္မဏာ ဝေဒဂူ သဗ္ဗဓမ္မေ၊ တေ မေ နမော တေ စ မံ ပါလယန္တု’ဟူသော ဂါထာတို့ဖြင့်ရှိခိုးပြီး ပရိတ်အရံအတားဖြင့်သွားလာသဖြင့်ကျော့ကွင်းနင်းမိသော်လည်း မဖမ်းမိနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။နှစ်ကာလရှည်ကြာလာသဖြင့် မုဆိုးလည်း တောထဲတွင် သေဆုံး၊ ခေမာမိဖုရားလည်း တောင့်တသည်ကို မရသဖြင့် နတ်ရွာစံလေ၏။ ထိုအခါမင်းကြီးက သူ့ချစ်မြတ်နိုးရသည့် မိဖုရားနှင့် သေကွဲခွဲရသည်ကိုဒေါမာန်ပွားကာ “ဟိမဝန္တာတောင်မှ ရွှေဥဒေါင်း၏ အသားစားရသူတို့သည် မအို၊ မသေရကုန်”ဟု ရွှေပေလွှာရေးထားခဲ့၏။ ထိုရွှေပေလွှာဖတ်ရသည့်မင်းခြောက်ဆက်နှင့်မုဆိုးခြောက်ဆက်တို့ ကွယ်လွန်သွားပြန်သော်လည်းရွှေဥဒေါင်းကိုဖမ်းမမိခဲ့ပေ။ခုနစ်ဆက်မြောက်မင်းလက်ထက်က မုဆိုးကမူ လိမ္မာပါးနပ်သဖြင့် မင်း၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူကာ ဥဒေါင်းမတစ်ကောင်ကို လက်ခုပ်တီးသံနှင့်ကတတ်၊ တွန်ကျူးတတ်သည်အထိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်ကြားပေး၏။ ထို့နောက်ရွှေဥဒေါင်းမင်း ကျက်စားရာတောင်ပေါ်၌ ကျော့ကွင်းထောင်ပြီး ဥဒေါင်းမကိုတွန်ကျူးစေ၏။ ထိုအခါ ဘုရားလောင်းရွှေဥဒေါင်းမင်းက ဒေါင်းမ၏ တွန်ကျူးသံကြားသည်နှင့် ကိလေသာ ထကြွလာသဖြင့် “ဥဒေတယံ စက္ခုမာဧကရာဇာ” ဂါထာကို ပရိတ်အရံအတားပြုရန်မရွတ်ဆိုနိုင်တော့သဖြင့်မုဆိုး၏ကျော့ကွင်းထဲ အမိခံလိုက်ရတော့၏။ဥဒေါင်းမ၏ တွန်ကျူးသံသဒ္ဒါရုံဟူသော အာရုံသည် အကြောင်းတရား ဖြစ်သည်။ ရွှေဥဒေါင်းမင်း၏သန္တာန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကြားသိစိတ် သောတဝိညာဏ်နှင့် ယှဉ်ဘက် စေတသိက်တို့သည် အကျိုးတရားဖြစ်သည်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ပါ်လာနိုင်ရန် အာရမ္မဏာဓိပတိ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ဤတွင်ဘုရားလောင်း ရွှေဥဒေါင်းမင်းအဖို့ ဥဒေါင်းမတွန်ကျူးလာသည့် အသံအာရုံသည် အကြီးအမှူး အဓိပတိဥဒေါင်းမ၏ တွန်ကျူးသံကြောင့်ဘုရားလောင်းရွှေဥဒေါင်းမင်း ညွှတ်ကွင်းမိထိုက်သဖြင့် အနှစ်နှစ်အလလက အလေ့အကျင့်ရှိခဲ့သော ပရိတ်အရံအတားဂါထာကို ရွတ်ဆိုရန်ပင် မစွမ်းနိုင်တော့သော အခြေအနေသို့ဆိုက်ရောက်ရှာပါတော့သည်။
သုတသောမဇာတ်၌ ပေါရိသာဒမင်းသည် လူသားကို အလေးအမြတ်ပြုသည်ဖြစ်၍ လူ့အသားတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ပြည်စည်းစိမ်ကို စွန့်၍ တော၌ လှည့်လည်၏။ ထိုဇာတ်စကားရပ်၌ လူသား၏ အနံ့အရသာတရားတို့သည် အာရမ္မဏာဓိပတိပစ္စည်း မည်၏။ ပေါရိသာဒမင်း၏ လောဘမူ စိတ်သည် ပစ္စယုပ္ပန်တရားမည်၏။သုတသောမမင်းသည် သစ္စာကို အလေးအမြတ်ပြု၍ သစ္စာတရားတည်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်ပြည်စည်းစိမ်၏ ပြည့်စုံခြင်း, ဆွေမျိုးအပေါင်းနှင့် မိမိ၏အသက်ကိုစွန့်၍ တဖန်ပေါရိသာဒမင်း၏ လက်သို့ ကပ်၏၊ထိုသို့ ကပ်ပြန်ရာ၌ သစ္စာတရားသည် အာရမ္မဏာဓိပတိ ပစ္စည်းမည်၏၊ သုတသောမမင်း၏ ကုသိုလ်စိတ်သည် ပစ္စယုပ္ပန်တရား မည်၏၊ ဤနည်းကို အလေးအမြတ် ပြုအပ်ကုန်သော အလုံးစုံသော အာရုံတို့၌ မှတ်အပ်၏ဟုပဋ္ဌာန်းသိပ္ပံဆရာတော်က ဖွင့်ဆိုတော်မူပါသည်။
အာရုံခြောက်ပါးက စားကျက်ဟုပမာပြုမည်ဆိုလျှင်စားကျက်၌ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဟူ၍ မရှိကောင်းပေ။ နာမ်တရားဖြစ်သည့် ကုသလဟေတုနှင့် အကုသလဟေတုကသာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဟူ၍ ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟဟူသောကုသလဟေတု အားကောင်းပါက ဒါန သီလ စသည့်ပြုပြုသမျှသော ကာမာဝစရကုသိုလ်တို့ကို ပစ္စဝေက္ခတိ အာရုံပြု၍ ဆင်ခြင်နိုင်၏။လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟဟူသော အကုသလဟေတု အားကောင်းပါမူကား ထိုထို ဒါန သီလ စသည့်ကောင်းမှုများအပေါ်၌ပင်အဿာဒေတိသာယာမြတ်နိုး၏၊ အဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်၏၊ ထိုသို့သာယာ မြတ်နိုး
နှစ်သက်မှုကိုအာရုံပြု၍ စွဲလမ်းကပ်ငြိမှုရာဂ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အယူလွဲမှားမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။သို့ဖြစ်ပါ၍ ကုသိုလ်မဖြစ်စေနိုင်သည့် အာရုံဟူ၍မရှိပါ။ ကုသိုလ်ရနိုင်ရန် အသုံးချနိုင်စွမ်းရှိသူနှင့် အသုံးချနိုင်စွမ်းမရှိသူတို့သာ ကွာခြားပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အတွင်းဓါတ်ခံအပေါ်၌ မူတည်ပါသည်။
ပမာပြရသော် အရှင်အာနန္ဒာနှင့် အရှင်ဒေဝဒတ်တို့သည် သာကီဝင်မင်းမျိုးချင်း တူညီသည်။ ခတ္တိယမျိုးနွယ်ချင်းလည်း တူညီသည်။ ဘုရား၏ညီတော်များ ဖြစ်တာချင်းလည်း တူညီသည်။ ရဟန်းဖြစ်တာ ချင်းလည်းတူညီပြန်သည်။
ဘုရားရှင်ထံ တောင်းခံသည့် ဖြစ်စဉ်၌လည်း တူညီပြန်သည်။ သို့သော်ဓာတ်ခံများက မိုးမြေမကကွာခြားလွန်းပါသည်။အရှင်အာနန္ဒာသည်ဘုရားထံပါးမှ ပယ်ဆုလေးမျိုး တောင်းခံခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘုရားရှင်သည်အကယ်၍
၁- အဖိုးထိုက်အဖိုးတန်သင်္ကန်းကို မပေးဘဲနေတော်မူပါလျှင်၊
၂- မွန်မြတ်သော ဆွမ်းခဲဖွယ်ကိုမပေးဘဲ နေတော်မူပါလျှင်၊
၃- ဘုရားရှင်ကျိန်းစက်တော်မူရာကျောင်း၌ နေထိုင်ခွင့်မပေးဘဲ နေတော်မူပါလျှင်၊
၄- ပင့်ဖိတ်ရာသို့ တပည့်တော်ကို မခေါ်ဘဲထားတော်မူပါလျှင် တပည့်တော်သည် ဘုရားရှင်အားလုပ်ကျွေး ပြုစုပါမည်ဘုရား။တစ်ဖန်အရှင်အာနန္ဒာသည်တောင်းဆုလေးပါးလျှောက်ထားသည်၊ ၎င်းတို့မှာ -အကယ်၍ ဘုရားရှင်သည်-
၁- တပည့်တော်လက်ခံထားသော ဖိတ်ကြားရာသို့လိုက်တော်မူပါလျှင်၊
၂- ရပ်ဝေးမှ ရောက်လာကြသော ပရိတ်သတ်အား ရောက်လာသောအချိန်မှာပင် ဘုရားရှင်ထံသို့ပို့ဆောင်ခွင့်ရ ပါလျှင်၊
၃- ယုံမှားသင်္ကာ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာခဲ့သော်ပေါ်လာသော အချိန်မှာပင်ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်ခွင့်ရပါလျှင်၊
၄- တပည့်တော်၏ မျက်ကွယ်မှာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားဒေသနာများကို တပည့်တော်အားထပ်မံ ဟောကြားတော်မူပါလျှင် ဘုရားရှင်အား တပည့်တော် လုပ်ကျွေး ပြုစုပါမည်ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ဒေဝဒတ်သည်လည်း တောင်းဆုငါးပါးကိုလျှောက်ထားဖူးသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရဟန်းအားလုံးသည်-
၁- အသက်ထက်ဆုံး တောကျောင်း၌သာ နေကြရန်၊
၂- ပင့်ဆွမ်းကိုပယ်၍ ဆွမ်းခံစားရန်၊
၃- သက်ထက်ဆုံး ပံ့သကူသင်္ကန်းကိုသာ သုံးဆောင်ရန်၊
၄- သစ်ပင်ရင်းဟူသော ကျောင်း၌သာ သီတင်းသုံးရန်၊
၅- သက်သတ် လွတ်ကိုသာ ဘုဉ်းပေးရေးကို သံဃာတော်တို့အား စည်းကမ်းပြဋ္ဌာန်းပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဒေဝဒတ်၏ လျှောက်ထားချက်သည်မြင့်မြတ်သူတို့၏ ကျင့်စဉ်ပမာ ထင်မှတ်ရပါသော်လည်း အရှင်ဒေဝဒတ်၏ မူလဓာတ်ခံ စိတ်ထား အလွန်ပင်ကောက်ကျစ်သဖြင့် ကြားကောင်းရုံ တောင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့ လိုက်နာကျင့်သုံးရန်သူ့၌ စိတ်ဆန္ဒမရှိပါလေ။အရှင်အာနန္ဒာနှင့်အရှင်ဒေဝဒတ်တို့၏ ဓာတ်ခံအားလျော်သည့်တောင်းဆုများအကြောင်းမှာ ရုပ်ကိုပဓာနပြုကာကြည်ညိုကြသူ သုံးပုံပုံလျှင်နှစ်ပုံရှိသည်။ ကျော်စောမှုကို ပဓာနပြုကာ ကြည်ညိုကြသူ ငါးပုံပုံလျှင်လေးပုံရှိသည်။ ခေါင်းပါးသော အကျင့်ကို ပဓာနပြုကာ ကြည်ညိုကြသူဆယ်ပုံပုံလျှင် ကိုးပုံရှိပြီး ဓမ္မကိုပဓာနပြုကာ ကြည်ညိုသူတစ်သိန်းပုံလျှင်တစ်ပုံသာရှိသည်ဟု မြတ်ဘုရား ဟောကြားတော်မူထားသည်။ဒေဝဒတ်သည် ဤခေါင်းပါးသောအကျင့်ကို လူကြိုက်များမှန်းသိထားပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒေဝဒတ်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုလျှင်ဘုရားသည်သူ့လောက်ပင်ဓမ္မရေးရာ၌ မလိမ္မာချေဟု စွပ်စွဲပေတော့မည်။ ဘုရားရှင်ခွင့်မပြုပါလျှင် ငါသည် မြင့်မြတ်သူတို့၏ မြင့်မြတ်သောကျင့်စဉ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် တောင်းဆိုပါသော်လည်း အားပေးခြင်းမရှိဟု စွပ်စွဲပေမည်။ နှစ်ဖက်အစွန်းမလွတ်အောင် ကောက်ကျစ် သောအကြံဖြင့် သံဃပရိသတ်အလယ်တွင်လျှောက်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
ဤသဟဇာတာဓိပတိ ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းသည် သာမန်လူစား အနုံစားတို့မဖြစ်ပွားနိုင်ကြကုန်။ သံသရာ ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်သော ဘုရား၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ သာဝကအလောင်းလျာကြီးများနှင့် ကမ္ဘာလောကကြီးများ ကြီးပွားအောင်ဆောင်ရွက်
ကြသည့် ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့မှာ များသောအားဖြင့်ဤဓိပတိပစ္စည်း ထင်ရှား၏။ မိမိတို့အလုပ်အဟုတ်ပြီးစီးအောင်အထူးသဖြင့် ကြံဆောင်အားထုတ်၍ ထိုထိုအမှုကိစ္စ ပြီးစီးအောင်မြင်ကြပါသည်။
“ဆန္ဒာဓိပတိ ဆန္ဒသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ တံ သမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော”ဟုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြီးတွင်လာရှိပါသည်။ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟူသည်လူထဲကလူဖြစ်ပါသော်လည်း အဓိပတိတပ်ရန် ပြုမူအားထုတ်ကြသဖြင့်သာ အဓိပတိခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြပေသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့်လည်းဤဓိပတိလေးပါးတရားနှင့်တွဲကာ တွဲကာ အားထုတ်ကြပါမူ ဤဘဝတွင်လည်း အဓိပတိလူကြီး လူကောင်းများ၊အစားစားဖြစ်နိုင်၏။ နောက် နောက်သံသရာ ကမ္ဘာလောကကြီး၌လည်း အဓိပတိအကျိုး အမျိုးမျိုးတို့ ခံစားကြပြီးလျှင် မိမိ မိမိတို့ အဓိပတိပါရမီအားလျော်စွာ ဘုရားအဓိပတိ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအဓိပတိ၊ သာဝကကြီးအဓိပတိ၊လူကောင်း နတ်ကောင်း ဗြဟ္မာကောင်း နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရောက်ကြရ ခံစားကြရပေမည်။အဓိပတိမဆောင်ဘဲ ထိုထိုအမှုတို့ကို ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ္တ၊ ဝီမံသတို့ နုံနဲ့ပြုလုပ်ကြပါမူ လူနုံ၊ နတ်နုံစသည်တို့ ဖြစ်ကြပါမည်။ အလတ်စား ပြုကြပါမူအလတ်စားလူ၊ နတ်မျှသာ ဖြစ်ကြပေမည်။နေ့စဉ် ကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်သည့် နံနက်စောစောထ ရေများ ဆီမီးများ ပူဇော်ကာ ဘုရားရှိခိုး၊ သီလဆောက်တည်၊ မေတ္တာစသော သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ကို ဝတ်ထားပြီး အားထုတ် ပြုလုပ်ကြရာတွင်ရံခါ စိတ်အားထက်သန်၍ ရံခါမှာမူနုံနုံနဲ့နဲ့ပျင်းပျင်းရိရိဖြစ်နေတတ်၏။ဤကဲ့သို့ ပျင်းပျင်းရိရိ မဖြစ်ဘဲ မဆုတ်မဆိုင်း မနှောင့်မနှေးစေဘဲ သဟဇာတာဓိပတိ စိတ်စေတနာဖြင့်ပြုလုပ်အားထုတ်ပါမူနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသည့်တိုင်အောင်ကျေးဇူးများပေမည်။နာမ်အဓိပတိဖြစ်သည့် သဟဇာတာဓိပတိ၌ ပါဝင်သည့် ဆန္ဒာဓိပတိ၊ ဝီရိယာဓိပတိ၊ စိတ္တာဓိပတိနှင့်ဝီမံသာဓိပတိတို့သည်အင်အားကြီးသော တန်ခိုးဣဒ္ဓိ၏ အခြေခံများ ဣဒ္ဓိပါဒ တရားများလည်း ဖြစ်ကြ၏။ထို့ကြောင့် ထိုတရားတို့သည် ကုသိုလ်နှင့် ယှဉ်လျှင်လည်း ကောင်းမှု အဖုံဖုံကို မနားမနေ ထက်ထက်သန်သန်ကြီး ပြုပေတော့သည်။ အကုသိုလ်နှင့် ယှဉ်လျှင်လည်း မကောင်းမှုအဖုံဖုံကို မနားမနေ ထက်ထက်သန်သန်ကြီး ပြုပေတော့သည်ဟုလယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသဒီပနီ၌ လာရှိပါသည်။
အသဒိသဒါနကြီးအတွက် သာဝတ္ထိပြည်၌ အပြိုင်အဆိုင် လှူဒါန်းနေကြသည့်ကာလတွင် ကောသလမင်းကြီး၏ ကဏှမည်သော အမတ်ကြီးတစ်ယောက်က “သူတို့ အပြိုင်အဆိုင် အနိုင်ဂုဏ်ထူးကိုရချင်လို့ လှူဒါန်းနေကြတာ ဘာကုသိုလ်ရမှာလဲ၊ ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ ကုန်ဆုံးရုံမျှပဲရှိတယ်” ဟုစိတ်၌ ပြစ်မှားလျက်ရှိနေ၏။အခြားအမတ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဇုဏှအမတ်ကြီးကမူကား “သြော် ဘုရားတစ်ဆူတစ်ဆူ သက်ရှိထင်ရှားကာလအတွင်း ကြီးမားမြင့်မြတ်လှတဲ့ ဒါနကြီးများ တစ်လှူသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ ဒီအသဒိသဒါနကြီးများကို ကိုယ်အား၊ဉာဏ်အား၊ ပစ္စည်းအား တို့နှင့် မနိုင်နိုင်အောင်၊အပြိုင်အဆိုင် ကြံဆောင်ပြုလုပ် အားထုတ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါပေတကား”ဟု စိတ်ဝယ်ဖြစ်ကာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျက်ရှိနေ၏။နောက်ဆုံးတွင် မလိကာမိဖုရားကြီး၏ စီမံမှုကြောင့် ကောသလမင်းကြီးက အနိုင်ရ၍ အနုမောဒနာတရားကို မြတ်စွာဘုရားသခင်က တစ်ဂါထာမျှသာ ဟောတော်မူပါသည်။ ထိုအခါ ကောသလမင်းကြီးက မကျေနပ်လှ၍ နောက်တစ်နေ့မှာ ဘုရားရှင်ထံပါးသွားကာ “ဤမျှလောက် ကြီးကျယ်သော ဒါနကြီးကို ပြုပါလျက်အဘယ်အတွက်ကြောင့် အနုမောဒနာတရားကို တစ်ဂါထာတည်းသာ ဟောကြားရပါသလဲဘုရား” ဟု လျှောက်ထားသောအခါ “အကယ်၍ ဤအသဒိသဒါန အကျိုးကြီးကြောင်းကို အကျယ်ပွား၍ ငါဘုရား ဟောကြားလိုက်သည်ရှိသော် ဤဒါနကြီးကို ချီးမွမ်းဝမ်းမြောက်သော ဇုဏှအမတ်မူကား သောတာပန်ဖြစ်သော်လည်းဤကဲ့သို့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော အလှူကြီးများကို စိတ်ဝယ်ပြစ်မှားကာနေသောကဏှအမတ်ကြီးသည်ကားဦးခေါင်းရှစ်စိတ်ကွဲ၍ တစ်ခါတည်း သေသွားမည်များကို ကရုဏာရှေ့ထား၍ တစ်ဂါထာတည်းသာ ငါဘုရားဟောကြားသည်”ဟု မိန့်တော်မူပါသည်မင်းနှင့်ပြည်သူ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအနိုင်ရအောင် ပြုလုပ်လှူဒါန်းကြသောအခါ သူတို့၏ စိတ်နေနှလုံးဝယ်သာလိုနိုင်လိုကြသည်မှန်သော်လည်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘဲ ဆန္ဒာဓိပတိ၊ ဝီရိယာ ဓိပတိ၊စိတ္တာဓိပတိနှင့် ဝီမံသာ ဓိပတိတည်းဟူသော အဓိပတိ၏ အင်အားကြီးသောကုသိုလ်နယ်ထဲကသာ လိုကြခြင်းပေတည်း။
သူတစ်ပါးနှင့် မဆက်ဆံသော ဘုရားရှင်၏ ဉာဏ်တော်အထူးတို့ကိုလည်း အလျဉ်းသင့်နေသဖြင့်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်-
၁။ သတ္တဝါတို့ဣန္ဒြေရင့်မရင့်ကိုသိသော ဣန္ဒြိယပရော ပရိယတ္တိဉာဏ်၊
၂။ သတ္တဝါတို့ အလိုဆန္ဒအာသယနှင့် ထိုသတ္တဝါတို့အတွင်းမှာရှိသော ကိလေသာနုသယတို့ကို တတ်တတ်ထင်ထင်သိမြင်နိုင်သော အာသ ယာနုသယဉာဏ်၊
၃။ ခပ်သိမ်းဥဿုံအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်သိမြင်နိုင်သော သဗ္ဗညုတဉာဏ်၊
၄။ အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိဘဲ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်သုံးတန်လုံးတို့မှာ ဖြစ်ထိုက်သမျှ စသောလောကီ၊ လောကုတ္တရာ အရာရာတို့ကိုတပ်တပ်ထင်ထင်သိမြင်နိုင်သော အနာဝရဏဉာဏ်၊
၅။ ရေ မီး အစုံအစုံသော တန်ခိုးပြာဋိဟာတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်လိုလျှင်ထင်မြင်ရအောင်ပြသနိုင်သော ယမကပါဠိဟာရိယဉာဏ်၊
၆။ သတ္တဝါအများ အစားစားတို့ကို ကြီးထွားမြင့်မြတ်သော သနားခြင်း မဟာကရုဏာ သမာပတ္တိဉာဏ်၊
ဆန္ဒအားနည်းကြကုန်သော လူများစွာတို့သည်ကြီးကျယ်သော၊ အလွန်ပြုနိုင်ခဲကုန်သော ယောကျာ်းမြတ်တို့သာ ပြုနိုင်သော လုပ်ရပ်တို့ကိုမြင်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်ဝေးစွ အားကျစိတ်မျှပင်ပေါ်ခဲ ပေသည်။ “ငါတို့၏အရာမဟုတ်”ဟုဆိုကာ လျစ်လျူရှုကာ ပစ်ထားတော့၏။ဆန္ဒအားကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ကြီးကျယ်သော၊ အလွန် ပြုနိုင်ခဲကုန်သော ယောကျာ်းမြတ်တို့သာ ပြုနိုင်သော လုပ်ရပ်တို့ကိုမြင်ပြီး ဆန္ဒတက်ကြွ။ ပြုရန်အလွန်အလိုရှိ၏၊ ဤအမှုသည်ငါ၏ အရာတည်းဟုဆုံးဖြတ်၏၊ သူ၏ဆန္ဒ ဆွဲငင်အပ်သည်ဖြစ်၍ အမှုကိစ္စ မပြီးသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး အကြား၌ ထိုအမှုကိုစွန့်ပစ်ရန်မစွမ်းနိုင်ချေ၊ ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် မည်သည့်အရာကမှ ဟန့်တားမရလောက်အောင် ထက်သန်သည့်ဆန္ဒ ပြင်းထန်နေသူအဖို့‘ဆန္ဒဝတော ကိံနာမ ကမ္မ နသိဇ္ဈတိ’ ဆန္ဒဝတော = ဆန္ဒ ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ကိံနာမ=အဘယ်မည်သောအမှုသည်၊ နသိဇ္ဈတိ= မပြီးဘဲ ရှိပါအံ့နည်း။ “အိုဆန္ဒကြီးမားရင်ဘာကိစ္စမအောင်မြင်ဘဲ ရှိရမလဲ”
ဝီရိယ တွန့်တိုဆုတ်ယုတ်သော လူများစွာတို့သည်လည်း ထိုထိုအမှုကိုမြင်၍ ဝီရိယ လျော့ကုန်၏၊ဤအမှုကိုပြုသော ငါ့အား များစွာသော ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲ, စိတ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆုတ်နစ်၏၊
ဝီရိယလွန်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ထိုသို့ သဘောရှိကုန်သော ယောကျာ်းတို့ ပြုအပ်ကုန်သောအမှုတို့ကိုမြင်၍ ဝီရိယ တက်ကြွ၏၊ ယခု ချက်ခြင်းသာလျှင် ထ၍ပြုရန် အလိုရှိ၏။ သူသည် ကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးလည်း
ထိုအမှုကိုပြုလျက်များစွာသော ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲစိတ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲကို ခံစားရသော်လည်း ထိုဝီရိယဖြင့် ပြုအပ်သောအမှု၌ မငြီးငွေ့ပေ။ ဆုံးခန်းတိုင်ရောက် ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။
အသက်ပင်သေလျင်သေပါစေ အသေခံကာ မရမနေကြိုးစား အားထုတ်သည့် ဝီရိယ ထက်သန်သူအဖို့‘ဝီရိယ ဝတော ကိံနာမ ကမ္မ နသိဇ္ဈ တိ’ ဝီရိယဝတော = ဝီရိယရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ကိံနာမ = အဘယ်မည်သော
အမှုသည်၊ နသိဇ္ဈတိ= မပြီးဘဲ ရှိပါအံ့နည်း။ “အိုဝီရိယကြီးမားရင်ဘာကိစ္စမအောင်မြင်ဘဲ ရှိရမလဲ”
စိတ်တွန့်တို ဆုတ်ယုတ်သော လူများစွာတို့သည် ထိုထိုအမှုတို့ကိုမြင်၍ စိတ် ဆုတ်နစ်ကုန်၏၊ တဖန်အာရုံလည်း မပြုနိုင်ကုန်။ စိတ်အားလွန်ကဲသူတို့ကား ထိုသို့ သဘောရှိကုန်သော အမှုတို့ကို မြင်၍ စိတ်တက်ကြွကုန်၏၊
စိတ်ကို ဖျောက်ရန်မစွမ်းနိုင်၊ အမြဲ ထိုအမှု၌ စိတ်စွဲမြဲ၏၊ သူသည်စိတ်အလိုသို့လိုက်၍ ရှည်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးလည်း ထိုအမှုကိုပြုလျက် များစွာသော ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲ စိတ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲကို ခံစား
ရသော်လည်း ထိုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပြုအပ်သောအမှု၌ မငြီးငွေ့ပေ။ ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။
‘စားလည်း ဒီစိတ်၊ သွားလည်း ဒီစိတ်’ဆိုရလောက်သည့်အထိစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြသူအဖို့ ‘စိတ္တဝတော ကိံနာမ ကမ္မ နသိဇ္ဈတိ’ စိတ္တဝတော=စိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ကိံနာမ=အဘယ်မည်သော အမှုသည်၊နသိဇ္ဈတိ=မပြီးဘဲ ရှိပါအံ့နည်း။ “အို စိတ်ဓာတ်သာ ကြီးမားရင်ဘာကိစ္စမအောင်မြင်ဘဲ ရှိရမလဲ”
ပညာနုံ့သော လူများစွာတို့သည်လည်း ထိုသို့ သဘောရှိကုန်သော အမှုတို့ကိုမြင်၍ ပညာဆုတ်နစ် ကုန်၏၊ အမှုတို့၏ အစအဆုံးကို မမြင်ကုန်၊ အမိုက်အမှောင်၌ ဝင်ရကုန်ဘိသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏၊ ထိုအမှုတို့ကိုပြုရန် စိတ်လည်း မညွတ်ကိုင်းပေ။ ပညာ လွန်ကဲသူသည်ကား ထိုသို့ သဘောရှိသော အမှုတို့ကိုမြင်၍ ပညာ တက်ကြွ၏၊ အမှုတို့၏ အစအဆုံးကို မြင်၏၊ အကျိုးရင်း၊ အကျိုးဆက်တို့ကိုမြင်၏၊ လွယ်ကူစွာ အမှုပြီးခြင်း၏ အထူးထူးသော အကြောင်းဥပါယ်ကိုလည်း မြင်၏၊ ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံးလည်း ထိုအမှုကိုပြုလျက်များစွာသော ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲစိတ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲကို ခံစားရသော်လည်း ထိုပညာဖြင့် ပြုအပ်သောအမှု၌ မငြီးငွေ့ပေ။ ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေလိမ့်မည်။ဤအကျိုးရလာဒ်ရရှိနိုင်ရန်ဤသို့ ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ရမည်ဟု ပိုင်းခြား သိနိုင်စွမ်းသူအဖို့ ‘ပညာ ဝတောကိံနာမ ကမ္မ နသိဇ္ဈတိ’ ပညာဝတော= အသိ `ဉာဏ်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အား၊ ကိံနာမ=အဘယ် မည်သောအမှုသည်၊နသိဇ္ဈတိ=မပြီးဘဲရှိပါအံ့နည်း။ “အိုအသိဉာဏ်ပညာ ကြီးမားရင်ဘာကိစ္စမအောင်မြင်ဘဲ ရှိရမလဲ”အဓိပတိပစ္စည်း တရားလေးပါးတို့ ထင်ရှားရှိသောကြောင့် လောက၌ ယောကျာ်းထူး ယောကျာ်းမြတ်တို့ထင်ရှားကုန်၏၊ သဗ္ဗညု ဗုဒ္ဓ၊ သဗ္ဗညု ဗောဓိသတ္တ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ၊ အဂ္ဂသာဝက၊ မဟာသာဝကနှင့်သာဝက လောင်းတို့ထင်ကုန်၏၊ လောက၌လည်း ဤသို့သဘောရှိကုန်သော ပုရိသဝိသေသတို့၏ အစွမ်းဖြင့် သတ္တလောက၏ အကျိုးအစီးအပွားချမ်းသာခြင်းငှာ အတတ်ပညာ အထူး၊အသုံးအဆောင်ဝတ္ထုအထူးတို့ထင်ကုန်၏။
ဘုရားအလောင်းတော်သည်ရှဉ့်မျိုး၌ဖြစ်သည့်ဘဝတစ်ခုတွင်မိုးသည်းထန်စွာ ရွာချသည်ရှိသော်ရှဉ့်သားကလေးများနေသော အသိုက်သည် သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထဲ မျောပါသွားတော့သည်။ ဘုရားအလောင်းတော်သည်သမုဒ္ဒရာရေကို ရှဉ့်အမြီးဖြင့် ဆွတ်၍ ဆွတ်၍ တစ်နေရာ၌ ခါချကာ သမုဒ္ဒရာရေခန်းခြောက်စေပြီး သားသမီးငယ်များကိုရေအလျဉ်မှကယ်ထုတ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေလေတော့သည်။ဤဖြစ်စဉ်ကို မြင်မိသည့်သိကြားမင်းကြီးက ရှဉ့်ထံလာပြီး ‘သမုဒ္ဒရာရေ ဘယ်တော့ကုန်မလဲ’ဟု ပြောရာဘုရားအလောင်းတော် ရှဉ့်က ‘လူပျင်းတို့နှင့် ငါစကားမပြောလိုဘူး၊ လာမနှောင့်ယှက်ပါနှင့်၊ ထွက်သွားပါ’ ဟုပြောကာ သိကြားမင်းကို နှင်ထုတ်လေသည်။ ဘုရားအလောင်းတော်ရှဉ့်၏ လုံ့လဝီရိယသည် အဓိပတိဖြစ်နေ
ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူနှင့်ယှဉ်ဖက်နာမ်တရားများလည်း ဝီရိယနောက်လိုက်ပါကာ သဟဇာတာဓိပတိသတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုခြင်းပေတည်း။ (ကျမ်းညွှန်း-ပါထိကဝဂ်အဋ္ဌကထာနှာ-၁၀၂)
ပုထုဇဉ် လူ့ဗာလတို့၌ လောဘသည် ဆန္ဒထက် အလွန်အားကြီး၏၊သို့ရာတွင်ပညာရှိတို့၏သန္တာန်၌မူဆန္ဒသည်သာ လောဘထက်အလွန်အားကြီးလေသည်။ အကယ်၍ လောဘသာ ဆန္ဒထက်အလွန်အားကြီးသည် ဖြစ်ငြားအံ့
လောဘလက်တွင်းသို့ ရောက်ကုန်သော ဤသတ္တဝါခပင်း တို့သည် ဘဝ၏ပြည့်စုံခြင်း၊ စည်းစိမ်၏ ပြည့်စုံခြင်းတို့ကို စွန့်ကာ နေက္ခမ္မ တရားတို့ကို ဖြည့်ပြီးဝဋ်ဆင်းရဲမှ အဘယ်သို့ ထွက်မြောက် နိုင်ကုန်အံ့နည်း။ ထို့ကြောင့် ဆန္ဒသည်
သာလျှင် အဓိပတိမည်၏။ လောဘသည်လည်းကောင်း၊ ဒေါသသည်လည်းကောင်း အဓိပတိမဖြစ်ပေ။ဝီရိယနှင့် ဆန္ဒသည် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မဟုတ်ပါ၊ ကုသိုလ်နှင့် ပေါင်းပါက ကုသိုလ်သတ္တိတိုးပြီး
အကုသိုလ်နှင့်ပေါင်းမိပါက အကုသိုလ်တန်ခိုးတိုး၏။ဟေတုပစ္စည်း၌ လောဘပါပြီး၊ အဓိပတိပစ္စည်း၌မူ ဆန္ဒပါသည်။ လောဘက အကုသိုလ်နှင့် သာပေါင်းပြီးကုသိုလ်နှင့်မပေါင်းပါ။ ဆန္ဒက ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ပေါင်းနိုင်ပါသည်။
ဟိတ်ခြောက်ပါးတွင်အဓိပတိရသည့်တရားဟူ၍ အမောဟဉာဏ်တစ်ပါးသာရ၏။ ကျန်နှစ်ပါးဖြစ်သည့်အလောဘ၊ အဒေါသဟိတ်တို့ကလည်း အမောဟဉာဏ်နှင့်ပေါင်းမှသာ အားကောင်း၏။
ဤတွင် သတိပြုစရာရှိလာသည်မှာ အဓိပတိပစ္စည်းထိုက်သည့် တရားလေးပါးလုံး အကုသိုလ်စေတသိက်ထဲ မပါဝင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆန္ဒလည်း ကောင်းတာရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ မကောင်းတာလည်း ရှိနိုင်သည်။ဝီရိယလည်း ကောင်းတာရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ မကောင်းတာလည်း ရှိနိုင်သည်။ စိတ်လည်း ကောင်းတာရှိနိုင်သကဲ့သို့မကောင်းတာလည်း ရှိနိုင်သည်။ ဝီမံသပညာကမူအကုသိုလ်ဘက်၌ မရှိပါ။ ကုသိုလ်ဘက်တွင်သာ ရှိ၏။
ဝိပဿနာတရားကို အားထုတ်သည့်ယောဂီက ကိလေသာကို ပယ်သတ်လိုပြီး မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုပါမူ ဆန္ဒသာ အဓိပတိထိုက်ပါက ဖြစ်ပါသည်။ ဝီရိယသာ အဓိပတိထိုက်ပါက ဖြစ်ပါသည်။ပညာသာ အဓိပတိထိုက်ပါက ဖြစ်ပါသည်။ စိတ္တသာအဓိပတိထိုက်ပါက ဖြစ်ပါသည်။ဝီရိယာဓိပတိ၌ ရိုးရိုးဝီရိယနှင့် အဓိပတိထိုက်သည့် ဝီရိယဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။ အဓိပတိထိုက်သည့်ဝီရိယသည် တန်ခိုးကြီး၏၊ ခိုင်ခံ့၏၊ မပျောက်ပျက်လွယ်ပေ။ အဓိပတိထိုက်သည့် ဝီရိယကြောင့် မောသည်၊ပင်ပန်းသည်ဟူ၍ မရှိတော့ပေ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဟူ၍ မရှိတော့ပေ။ အသက်သေနိုင်သည်ကိုလည်း မငဲ့ကွက်တော့ပေ။
မဟာဇနကဇာတ်တော်၌ ဘုရားအလောင်းတော်ဇနက မင်းသား၏ခမည်းတော်ကို ဘထွေးတော်က စစ်ပွဲဆင်နွဲပြီး မိထိလာပြည်ကိုအရယူသွားတော့သည်။ဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသည့်မိဖုရားခေါင်ကြီးသည် ကိုယ်လွတ် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။သားကလေး ဖွားမြင်လာသောအခါ မင်းသားငယ်၏ အဖိုးအမည်ဖြစ်သည့်ဇနကမင်းသားဟုမှည့်ခေါ်၏။အရွယ်ရောက်လာသောအခါ ဖခင်အစစ်အမှန်ကို ဖုံးကွယ်ထား၍ မဖြစ်တော့သည့်တစ်နေ့ မယ်တော်ကြီးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ပြောပြ၏။ ဇနကမင်းသားကလေးက အဖ၏တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်စီမံရာတွင်ဥစ္စာဘဏ္ဍာကို ဦးစွာစုဆောင်းရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါသည်။မယ်တော့ထံမှ ဥစ္စာငွေကြေးအချို့ကို အရင်းအနှီးအဖြစ်ယူပြီး မယ်တော်ကြီး အတန်တန်တားသည့်ကြားကပင် ကုန်ကူးသန်းရန်အတွက် သုဝဏ္ဏဘူမိသို့ ရွက်သင်္ဘောဖြင့်ထွက်ခွာလာ၏။ ပင်လယ်ပြင်တွင်လေမုန်းတိုင်းမိသဖြင့် သင်္ဘောပျက်လေသည်။ ထိုအခါ မင်းသားသည် သင်္ဘောရွက်တိုင် ထိပ်သို့တက်ကာတစ်ကိုယ်လုံး ထောပတ်ဆီများ သုတ်လိမ်းပြီး သင်္ဘောနှင့် အဝေးဆုံးရောက်အောင် ခုန်ချပါတော့သည်။ပင်လယ်ပြင်တွင်မည်သည့်အစာမှ မစားရသော်လည်း ဥပုသ်နေ့၌ ဥပုသ်စောင့်တော်မူသေးသည်။ မင်းသားသည်ဘုရားအလောင်းတော်ဇနကမင်းသား၏ အဓိပတိထိုက်သည့်လုံ့လဝီရိယ မလျော့ချဘဲ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး မိထိလာပြည်သို့ ရည်မှန်းကာ ကူးခတ်နေတော့၏။ ခုနစ်ရက်ပြည့်သောနေ့တွင် မဏိမေခလာနတ်သမီးက ကယ်တင်ပြီး မင်းသားရည်မှန်းထားရာ မိထိလာပြည်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ထိုကာလ၌ မိထိလာပြည့်ရှင်ဘုရင်ဘထွေးတော်မင်းတရားကြီး နတ်ရွာစံပြီးချိန်ဖြစ်သဖြင့်စစ်မတိုက်ရဘဲဘုရင်အဖြစ်ကို ရောက်တော်မူ၏။ အလောင်းတော်၏ ဝီရိယသည် ထက်သန်သဖြင့် အတူဖြစ်ဖက်နာမ်တရားများနှင့်စိတ္တဇရုပ်များလည်း ဝီရိယ၏အလိုအတိုင်း လိုက်ပါပေးရတော့သည်။ အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်မှ နာမ်တရားအကြီးအမှူးဖြစ်သည့် ဝီရိယဦးဆောင်ရာသို့ ဆန္ဒ၊ စိတ္တ၊ ဝီမံသတို့သည်လည်း ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးတော့သည်။
ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ္တ၊ ဝီမံသ လေးပါးလုံး တပြိုင်တည်း အဓိပတိမရပါ။ အကြောင်းမှာ အဓိပတိဟူသည်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သဖြင့် ပြိုင်ဘက်ကင်း၏။ ထို့ကြောင့် ဆန္ဒကအဓိပတိဖြစ်ပါက ကျန်သူတို့ နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီးဆန္ဒခိုင်းသမျှကိုလုပ်ပေးရသည်။ဆန္ဒက ပစ္စယ အကြောင်းတရားဖြစ်လျှင် ကျန်သုံးပါးက ပစ္စယုပ္ပန်အကျိုးတရား ဖြစ်၏။ စင်္ကြာမင်းဟူသည် ဤကမ္ဘာ မြေပြင်၌ တစ်ဦးတည်းပိုင်စိုးအုပ်ချုပ်သကဲ့သို့တည်း။ဝီရိယဦးဆောင်လျှင်လည်း ကျန်သူတို့က နောက်လိုက် ဖြစ်၏။လောဘစေတသိက်က စိတ်ကို ချယ်လှယ်ပြီး လောဘစိတ်ပြင်းထန်လာပါကလောဘစိတ်က အဓိပတိဖြစ်တော့၏။ ကျန်သူတို့နောက်လိုက်အဖြစ်လောဘစိတ်အလိုကျ ဆောင်ကျဉ်းပေးရပေတော့မည်။မကောင်းသော အကုသိုလ်လုပ်ဆောင်မှုအစုစုတို့၌ ဓမ္မသဘာဝကပင် အသိအလိမ္မာ ဉာဏ်ပညာ ဝိဇ္ဇာ အမောဟမပါဝင်သောကြောင့်စိတ်ဇောအားကြီးသည်နှင့် အမျှ၊ ဝီရိယထက်သန်သည်နှင့်အမျှ၊ ဆန္ဒပြင်းပြသည်နှင့်အမျှ တိုး၍တိုး၍သာ မိုက်ကြပေတော့သည်။ အကြောင်းမှာ ဝီမံသပညာ၏ ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုမရသောကြောင့်ပေတည်း။
အဓိပတိပစ္စည်း၊ ပစ္စယုပ္ပန်၊ သုဒ္ဓသင်္ချာနှင့်မျိုးတူပစ္စည်း
ပစ္စည်းဟူသော အကြောင်းတရားမှာ ဆန္ဒ၊ ဝီရိယ၊ စိတ္တ၊ ပညာပစ္စယုပ္ပန်ဟူသော အကျိုးတရားမှာယှဉ်ဖက်စေတသိက်နှင့်စိတ္တဇရုပ်များတည်း။
ပစ္စယေန ပစ္စယော = အကြောင်းတရားက အကျိုးတရား ဖြစ်ပေါ်အောင် ကျေးဇူးပြုသည်။ (တစ်နည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားရှိလို့သာ အကျိုးတရားဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်)